Rudi Garcia Oo Ka Hadlay Hogaamiye Nimada Totti Iyo Hanashada Horyaalka Talyaaniga | Berberanews.com
Home CAYAARO Rudi Garcia Oo Ka Hadlay Hogaamiye Nimada Totti Iyo Hanashada Horyaalka Talyaaniga
Rudi Garcia Oo Ka Hadlay Hogaamiye Nimada Totti Iyo Hanashada Horyaalka Talyaaniga
Tababaraha kooxda Roma Rudi Garcia ayaa sheegay war ayla yaabeen taageera yaasha kooxda Roma iyo kuwa kale ee aan taageerin xitaa kadib markii uu sheegay in kabatan Francesco Totti uu yahay laacib xirfad leh lakiin aan lahayn tilmaamaha hogaamiye nimo.
Marca ayaa soo tabisay hadalka tababarahaan ree France isagoo yidhi” si aad u barato laacib kasta waa inaad si fiican u fahan taa dabeecadiisa, anigu waxba kama aqaan Messi iyo Ronaldo dhabtii, waayo lama dhaqmin iyaga, lakiin waxaan la dhaqmay Totti, waxana odhan karaa waa laacib dabeecad wanaagsan, dadaal badan hal marna aan u gan bin tababarka kooxda, igamana dalban inaan si gooniya ula dhaqmo, balse ma aha hogaamiye.
Tababaraha ree France ayaa intaa ku daray” Totti hogaamiye kama aha qolka labiska dhexdiisa, kuma qayliyo saaxiibadiis lakiin wuu dhiira galiyaa, way jecel yihiin laacibiinta dhamaantood wuxuuna yahay laacib ay ku daysadaan marka lagu jiro garoonka gudihiisa.
Garcia ayaa sidoo kale ka hadlay hogaanka horyaalka Talyaaniga oo ay kala wareegtay Juventus wuxuuna yidhi” aad ayeey u adagtahay in lagu guulaysto horyaalka, waxaan u baahanahay inaan dib u helno xamaasadii aan ku bilownay horyaalka, lama mid ihin Juventus iyo Napoli waayo waa laba koox oo diyaar u ah tar tanka horyaalka iyo Champions League.
Waxaana lagu micneeyay hoos u dhaca ku yimid kooxda Roma kulamadii u dan beeyay inay kadan baysay dhaawaca Totti, isagoo uu dha dhan belay weerarka Roma kadib dhaawaca soo gaadhay laacibkan ree talyaani.
Previous articleLaacibkii hore ee Liverpool oo ka bad baaday ganaax ka soo wajaha xidhiidhka FA-da Ingiriiska
Next articleHalkuu Ku Dambeeyey Ballan-qaadkii Siilaanyo ee ahaa ‘UDUB Way Tagaysaaye Ha Tahriibin Walaal?’